သုခ ရိပ်မြုံ အ ပျိုကြီး ဘုံ – Hlataw.com
သုခ ရိပ်မြုံ အ ပျိုကြီး ဘုံ
.ဝေလွင်နှင့်ကလျာတို့သည်ညားခါစ . လင်မယားများဖြစ်သည်.. ထို့ကြောင့်နှစ်ဖက်မိဘများနှင့် အတူမနေချင်ကြပေ… ..ကြင်စဦးမို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝုန်းချင် သလို ကုတင်ကျိုးသွားအောင်အထိစောင့် ချင်ကြလေသည်…. ..ထို့ကြောင့်နှစ်ဦးသားအလုပ်ပိတ်ရက်မှာ အိမ်ငှါးအရှာထွက်ကြလေသည်… …အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အကူအညီနှင့် လှလှဟုခေါ်သော်အပျိုကြီးအိမ်သို့သွားကြည့်ကြသည်..
အိမ်သည် နှစ်ထပ် ပျဉ်ထောင် ပျဉ်ခင်း အိမ်ဖြစ်သည်.. အိမ်အောက်ထပ်ဝင်သော တံခါးဘေးတွင် အပေါ်ထပ်လှေကားထားသလို.. အိမ်နောက်တွင်လည်း မီးဖိုဂျောင်ဘေးမှ အပေါ်တက်သောလှေကားရှိလေသည်.. ရေချိုးလျှင် အိမ်ခြေရင်းဘေး.အောက်ထပ်ခြေရင်းပြတင်းပေါက် ဘေးတွင်ချိုးရသည်.. အိမ်သာမှာအုတ်ခံ ပျဉ်ကာ အိမ်သာလေးဖြစ်သည်.အလေးအပေါ့သွားလျင် အောက်ထပ်နေသူက တန်းသွားလို့ရပေမဲ့ အပေါ်ကလူက လှေကားမှဆင်းရမည်ဖြစ်သည်..
အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းတခု အလယ်အိပ်ခန်းတခုနှင့်..ထမင်းစားဟင်းချက် ဖို့က အနောက်မှာတခန်းရှိသည်.. …အိမ်ရှင်ကအပေါ်ထပ်မှာနေသည်..အပျိုကြီးဖြစ်၍နားအေးပါအေးနေလို့ရလေသည်.. ထို့ကြောင့်သူတို့အောက်ထပ်ကိုငှါးလေသည်.. …လှလှသည်အသက် ၃၇ နှစ်သာရှိသေးသည်..အပျိုကြီးအစစ်တော့မဟုတ်ပါ..ယောက်ျားဖြစ်သူက မလေးရှားမှာအလုပ်လုပ်ပီးနောက်မိန်းမယူသွားသဖြင့် ကွာရှင်းပြတ်ဆဲကာ.. တကိုယ်တည်း အပျိုကြီး ခပ်တီတီလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်.. ..သူမသည်ရုံးဝန်ထမ်းတဦဖြစ်သည်.. အိမ်တွင်တယောက်ထည်းနေ၍စိတ်မချဖြစ်ကာလွတ်နေသောအောက်ထပ်ကို. အိမ်စောင့်သဘောငှါးစားခြင်းဖြစ်ပေသည်..
အသက်၂၀ ကျော်ညားခါစလင်မယားလေးမို့. သူမ ကျေကျေနပ်နပ် ငှါးလိုက်လေသည်. ..ဝေလင်းနှင့်ကလျာမှာ အလုပ်များလုပ်ကြသည်… ကလျာက ကုန်ပနီတခုမှာလုပ်ပီး.. ဝေလွင်က ဆံပင်ညှပ်စားသူဖြစ်သည်.. ……. ..အပျိုကြီးအိမ်ပြောင်းကြလေသည်… အလုပ်ပိတ်ရက်ပြောင်းကြသဖြင့်.. လှလှလည်းဝိုင်းကူပေးလေသည်… ..လှလှသည် ငယ်ရွယ်ချောမောသောကလျာကိုခင်မင်မိလေသည်.
ထို့ကြောင့်ညနေစာအတူစားရန်ဖိတ်လေသည်.. ညဘက်အပြင်ထွက်စားတာမဟုတ်ပါ.. အိမ်ပေါ်မှာလာစားရန်ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်.. ..ပစ္စည်းသယ်ကြသဖြင့် မောပန်းကာချွေးထွက်ကြလေသည်.. ထို့ကြောင့် လှလှက..ရေချိုးတော့မယ်ဟုဆိုကာအပေါ်တက်သွားလေသည်. ကလျာ နှင့် ဝေလွင်တို့မချိုးအားပါပစ္စည်းများနေရာချနေသည်.. အလယ်ခန်းမှာမှောင်နေ၍.. ဝေလွင် ပြတင်းသွားဖွင့်လိုက်စဉ်…. ရေချိုးသံကြားရ၍.ပြတင်ပေါက်ထောင့်လေးမှ အသာချောင်းလိုက်ရာ.. ဖင်ကုန်း၍ ခြေချောင်းလေးမျာကို ထမိန်အောက်စများနှင့် ပွတ်နေလေသည်.
ချေးတွန်းတာဖြစ်ရမည်… ရေစိုထမိန်မှာ..တင်းရင်းနေပီး… တင်ပါးတဖက်နေရာတွင် အနည်းငယ်ပြဲနေလေသည်… “အိုးမိုင်ဂေါ့…အပြဲနေရာမှ တင်သားအဖြူကွက်က ပြူးထွက်နေသည်… ထမိန်ရင်လျားနဲ့မို့ ကြောသားအဖွေးကြီးက ရေဆေးငါးလို ပြောင်နေပြန်ရာ… ဝေလွင် လီးတောင်ပါတော့သည်… ပုဆိုးဝတ်သော်လည်း အတွင်းခံအစား.. ဘောလုံးကန်ဘောင်ဘီဝတ်သောကြောင့် လီးမှာ အလွန်ထန်လေတော့သည်.. ကလျာ အလုပ်ရှုပ်နေ၍ မသိလိုက်ပါ.. ဝေလွင်မှာလီးတောင်လျက် ကလျာနောက်သို့ရောက်လာပီး.. “သဲလေး တချီလောက်..”. . “ဟာ ညမှလုပ်လေ ဒီမှာမအားဘူး”. . “တခါထဲပါကွာနော်..ရှေ့ကသေတ္တာမှာကုန်းလိုက်”. . “ဟင့်”. ..လင်ကိုချစ်၍ ကုန်းရပြန်သည်.. ကလျာရဲ့ ထမိန်ကို လှန်လိုက်ပီး.. ဝေလွင်ကြုံးပါတော့သည်..
စိတ်ထဲမှာ တော့အပျိုကြီးလှလှ၏နောက်ကြောနှင့် ဖင်ကိုမှန်း၍ ကာမစိတ်နိုးထနေသည်.. ……ပစ္စည်းများသယ်ထား၍ပင်ပန်းသဖြင့် လရည်ကြည်သာထွက်ပီးမပီးနိုင်ပါ.. “ကို.. မြန်မြန်လုပ်ပါ အ့ အ့..ကြာလိုက်တာ”. .. …..လှလှ အဝတ်အစားများလဲပီးနောက် ဘော်လီဝတ်ပီးအောက်ခံဘောင်းဘီမဝတ်ပဲ..အိမ်နေရင်းအဝတ်အဟောင်းများဝတ်ကာ.. ကလျာကိုကူညီရန်ပြန်ဆင်းလာသည်.. ..စပြောင်းနေ့မို့တံခါးများသော့မခတ်ရသေးပါ.. ထို့ကြောင့်လှလှအလွယ်တကူဝင်နိုင်လေသည်.. .အလယ်အိပ်ခန်းအတွင်းမှ တအအ အသံနှင့် ကြမ်းလှုပ်သံကြောင့်လှလှ ရပ်လိုက်သည်.. ..ထို့နောက် ရှေ့သို့ဖြေးဖြေးလျှောက်ပီး. အခန်းအားချောင်းလေတော့သည်..
လှလှ အံ့သြလေပီ.. ဟယ်..ဒီလင်မယား ခုမှစပြောင်းတယ် တန်းလိုးတော့တာပဲ..ငတ်လိုက်ကြတာဟု စိတ်ထဲတွေးမိသည်…ကြည့်လို့ကောင်းလှပေသည်… ကလျာ၏ သွယ်လှသောခြေသလုံးနှင့်ပေါင်ဆင်းဆင်းလေးက ဖြောင့်ဖြောင့်ရပ်ကာ ဖင်ကုန်းပေးနေသည်.. အမာရွတ်မရှိပဲဝင်းပြောင်နေသောတင်သားကိုလှလှမြင်၍ မနာလိုတောင်ဖြစ်မိသည်… ဝေလွင် ၏လီးမှာလည်း အဖုတ်ထဲတိုးဝင်နေ၍အနောက်မှခြောင်းနေသော လှလှ ကောင်းစွာမမြင်ရပေ.. မတ်တပ်ရပ်အနောက်မှလိုးသဖြင့် လဥ မဲမဲကြီး ခါယမ်းနေတာပဲမြင်ရသည်… ဝေလွင်သည် ကလျာရဲ့ခါးကိုကိုင်ကာ ဆက်တိုက်လိုးနေသဖြင့် လှလှ စပ မှာ အလိုးမခံရပဲ အလိုလို ယားနေသည်…
ထိုစဉ် ဝေလွင် တချက် နှစ်ချက် ဆက်တိုက်ဆောင့်ပီး ပီးသွားလေသည်.. “အား ကောင်းလိုက်တာ ရေဆေးငါးကြီးရယ်”. .. လှလှကြားလိုက်ရသည်ဘာမှန်းတော့မသိ.. ထို့ကြောင့်အပြင်သို့​ခြေဖော့ထွက်ပီး.. အပေါ်ထပ်သို့ပြေးရလေတော့သည်… လှလှစဉ်းစားနေမိသည်. အဲ့ကောင်ဘာလို့ရေဆေးငါးလို့သူ့မိန်းမကိုခေါ်သလဲပေါ့.. ကလျာလဲရေမစိုပါ…. ဟင်…ဒီကောင်ငါရေချိုးတာမြင်သွားတာလားမသိဘူး..ပြတင်းပေါက်ဖွင့်တာတော့သိလိုက်သည်.. သတိမထားမိလိုက်ပါ.. သေခြာတယ်ဒီကောင်င့ကိုခြောင်းပီးသူ့မိန်းမကိုလုပ်တာနေမယ်… ဟင်း..ဟင်း….ဟုတွေးနေလေသည်… ..လှလှအိပ်ခန်းနှင့်အောက်ထပ်အိပ်ခန်းကတနေရာထဲဖြစ်သည်..
အိမ်စဆောက်စဉ်ကသစ်သားပြားများမှာစိနေသော်လည်း ကြာလာသောအခါမှာ စပါးလုံးတထောက်စာလောက်ဟလာလေသည်..ထို့ကြောင့်အပေါ်မှ အမှုန်များအောက်သို့မကျအောင်ကော်ဇောအပြည့်ခင်းထားရသည်. .ကော်ဇောများမှာလဲနှစ်ကြာ၍ ဟိုနားဒီနားပြဲတာလေးများရှိသည်.. လှလှအိပ်ယာမှာကုတင်မဟုတ်ပါ.. မွေ့ယာအကြီးတခုသာဖြစ်သည်.. အိပ်ယာဘေးတွင်ကောအဇော်အပြဲလေးရှိသည်..ပိုမပြဲအောင်တိတ်ကပ်ထားလေသည်.. ထို့ကြောင့်သူမတိတ်ကလေးကိုခွာလိုက်ပီး ထပ်များဘွတ်နေမလားလို့ခြောင်းကြည့်လေသည်. ကလျာနှင့်ဝေလွင်အထုတ်များရှင်းလင်းနေတာတွေ့၍..သူမ မကြည့်တော့ပါ..
ညနေစာ စားချိန်ရောက်လေပီ.. မလှ အောက်ထပ်ဆင်းပီး… “ဟဲ့ ကလျာတို့ ထမင်းစားမယ်လေ.. အပေါ်တက်ခဲ့ကြလေ”. .. “လာပီ အမရေ ခုမှရေချိုးပီးကြတာ”. . ထမင်းအတူစားရန် သူတို့လင်မယား အပေါ်တက်ကြလေသည်… ဝေလွင် အပေါ်ထပ်ကိုလေ့လာနေမိသည် ကော်ဇောအပြည့်ခင်းထားပီး.. ရှေ့ခန်းတွင် တီဗီ တလုံးသာရှိလေသည်.. အလယ်အိပ်ခန်းမှာ တံခါးမရှိ အခန်းတခုအနေသာရှိသည်.. နောက်ဆုံးခန်းက ထမင်းဟင်းချက်နေရာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိလေသည်.. “မလှ အိမ်က သန့်ရှင်းနေတာပဲနော်”. . “တယောက်ထဲဆိုတော့ဘာမှမဝယ်ဖြစ်တာ” ကလျာက..”အမက လှလိုက်တာ ရီးစားမရှိဘူးလား”. . “မရှိပါဘူးဟယ်.တယောက်ထဲသာယာပါတယ်..
ခ်ခ်..” ဝေလွင် ကတော့ ကလျာလစ်ရင်လစ်သလို လှလှ၏ ရင်သားနှင့်ဖင်ကို ခိုးကြည့်နေမိသည်.. လှလှသည် အသားဖြူကြီးမဟုတ်ပါ.. အသာအရေဝင်းဝါ စိုပြည်သူဖြစ်သည်.. ရင်သားက အကြီးကြီးမဟုတ်ပဲ အုတ်မုတ်ခွက် တချမ်းစာလောက်ကြီးကာ လုံးလုံးတင်းတင်းဖြစ်သည်.. ခါးသေး၍ထမိန်ကိုတင်းကြပ်စွာဝတ်သဖြင့်.. စွံကားနေသောတင်းသားက ကိုင်ချင်စရာ.. ဝေလွင့်တို့ တီဗီ ကြည့်ကြလေသည်.. ကိုရီးယားကားဖြစ်၍ကလျာကအလွန်ကြိုက်လေသည်.. ထို့​ကြောင့်အလည်တည့်တည့်မှာထိုင်ကာ ကြည့်လေတော့သည်… လှလှက သူမအိပ်ခန်းဘောင်ကိုမှီကာကြည့်သည် ဝေလွင်က လှလှနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုင်ကိုမှီကြည့်လေသည်… ဝေလွင် တီဗီ ကို အာရုံမရပါ… သူ့ရှေ့မှဘေးစောင်းလေးထိုင်ကာ တီဗီ ကြည့်နေသော လှလှဖင်ကိုသာခိုးကြည့်နေသည်.. ဝေလွင် ဘောလုံးကန်ဘောင်းဘီကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးမို့ အရမ်းကြိုက်လေသည်..
အိမ်မှာ နေသည်ဖြစ်လို့ ပုဆိုးမဝတ်ပါ. ပူလို့ဖြစ်သည်… ဝေလွင်..ဘယ်ဒူးထောင်၍.တီဗီ ကြည့်လိုက်သည်. .ဘောလုံးဘောင်းဘီမှအပျော့ဖြစ်၍အနည်ငယ်လျောကျလေသည်.. ဘယ်လက်ကိုထောင်သောဒူးပေါ်တင်၍ မျက်နှာကိုပွတ်နေလိုက်သည်..ယားလို့ပွတ်တဲ့သဘောမျိုး.. ညာလက်က ဒူးကွေးကာ လှဲထားသောညာပေါင်ကို ပွတ်ရင်း.. ဘောင်းဘီပေါက်မှလက်လျှိုသွင်းကာ. လီးကိုကိုင်ပွတ်နေသည်..ဝေလွင်တမင်လုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်.. လှလှအခန်းဘောင်ကိုမှီ၍.ခေါင်းရင်ဘက်မှ တီဗီ ကိုကြည့်သဖြင့် လှည့်ကြည့်ရလေသည်.. ဝေလွင် က အောက်စလွတ်သလိုတမင်လုပ်နေသဖြင့် လှလှနှင့်ဒဲ့မထိုင်တော့ပဲ တီဗီ ဘက်လှည့်လေသည်… ထို့ကြောင့် လှလှ လည်ပင်းပြန်လှည့်တိုင်းမှာ ဝေလွင် ဒူးထောင်တာမြင်ရသလို..ဘောင်းဘီအပေါက်တွင်းကိုပါမြင်ရသည်.. သူမတချက်လှည့်ကြည့်ပီး တီဗီ ဘက်ပြန်လှည့်လေသည်..
ဝေလွင် မျက်စိထောင့်မှ မြင်နေရသည်. မသိချင်ယောင်ဆောင်၍.. ညာလက်က လီးကို ပွတ်ပြသလို.. ထောင်နေသောဒူးအောက်က ဘောင်းဘီပေါက်ဆီ လီးကို တွန်းထားလိုက်သည်… ကလျာမှာညောင်းလာ၍ ဝမ်းလျှားမှောက်ကာ တီဗီ ကြည့်လေသည်.. ထို့ကြောင့်ကလျာရဲ့ဘယ်ဘက်မှာလှလှ ညာဘက်မှာဝေလွင် ရှိသည်… ထိုအခါ လွလွက.. “ဟဲ့ကလျာ ညောင်းနေပီလာဟ”ဟုဆိုကာ ကလျာရဲ့ ပေါင်ကိုလာပုတ်ပီး..တီဗီ ငေးနေသော..ဝေလွင့်ပေါင်ကြားကိုကြည့်လေသည်..
ဝေလွင်လူပျိုဘဝကလီးကြီးဆေးထိုးဖူးသည်..ထို့ကြောင့်လုံးပတ်က ကြံချောင်းလိုကြီး၍အရှည်က ၇ လက်မ ရှိသည်.. ဝေလွင်သည် ခြေသလုံးပုလွေရိုး ငပိန်ဖြစ်သော်လည်း လီးက ဝလေသည်. လှလှ တွေ့ပီလေ လီးဒစ်ကြီးမှာ နီညီုရောင်ဖြစ်သည်… ဝေလွင့်မသိယောင်ဆောင်၍အဆင့်တက်လိုက်သည်. လီးယားသလိုနှင့်ထိပ်နှင့်ကိုယ်ထည်ကိုပွတ်လိုက်ထုလိုက်လုပ်ပြလေသည်. ထိုစဉ် တီဗီ ဇာတ်လမ်းပီးလေသည်.. ကလျာကထလိုက်ပီး.. “အမရေ..ကျမတို့အိပ်တော့မယ်နော်. မနက်စောစောအလုပ်သွားရအုံးမယ်”. . “အော်အေးအေး.နောက်နေ့လဲလာခဲ့ကြနော်” ဝေလွင် လည်း မတတ်နိုင်ထရပ်ပီး “ဂုည.မလှ.မနက်ဖြန်လာကြည့်မယ်နော်” လှလှ က ဝေလွင်ရဲ့ပေါင်ကြားကိုတချက်ကြည့်လိုက်ပီး “အားမနာကြနဲ့သလား နင်တို့ရှိမှပဲ ငါလဲ အဖော်ရတော့တယ်”.
.ဝေလွင့် တို့အောက်ထပ်ဆင်းကြပီး အိပ်ယာတန်းဝင်လေသည်… လှလှ လည်းအခန်းထဲအမြန်ဝင်ပီး.ကြမ်းပေါက်လေးမှချောင်းလေသည်.. လှလှ ပိပိကြီး အတော်ယားနေပါသည်.. ဝေလွင်၏လီးကို သေသေခြာမြင်ခဲ့သည်. ကြီးမားတုတ်ခိုင်၍သန်မာလှသည်.. သူမ စပ မှာလည်းအရေစိုနေလေပီ.. အောက်ထပ်ခန်းမှာ လိုးနေမလားမျှော်လင့်ချက်နှင့်ချောင်းရင်း ကာမဆန္ဒ ထကြွနေလေသည်.. ….ဝေလွင်နှင့်ကလျာ နှုတ်ခမ်းခြင်း​တေ့စုပ်နေကြသည်.. “သဲလေး စုပ်ပေးကွာ အရမ်းထန်နေပီ”. . ဘောင်ဘီချွတ်ကာလှဲပေးလိုက်သည်.. ထောင်မတ်နေသော လီးကို ကလျာက ချက်ချင်းမစုပ်ပဲ ဂွင်းအရင်ထုပေးနေသည်… အပေါ်ကလှလှ ကအားလုံးမြင်နေရ၍ သူမ၏ပိပိကို လက်ခလယ်နှင့်ထိုးပွတ်နေလေသည်…
ကလျာ စတင်၍ ပါးစပ်ထဲဒစ်ကိုအရင်သွင်းကာ. စစုပ်ပေးသည်..သူမ သည် အဝတ်များချွတ်လေသည်..ကြောသားချောချောနှင့်တင်သားလုံးလုံးလေးမျာကလှလှမြင်ရ၍ မနာလိုတောင်ဖြစ်နေသည်.. ဝေလွင်၏လီးမှာ တံတွေးများနှင့်ပြောင်လက်နေပီ.. ကလျာ၏လက်နှင့်လျှာကြားမှာထွန့်ထွန့်လူးနေလေသည်… အား..အင့်…ရှီး..ဟူ… ကောင်းလိုက်တာမိန်းမရယ်…အဖျားလေးကို လျှာနဲ့ထိုး အင်း….. ဝေလွင် လှလှမြင်အောင်လီးကိုပွတ်နေကတည်းက ပီးချင်နေသည်.
ယခု ကလျာကအစုပ်ကောင်း၍သုတ်ထွက်ရန်တာဆူနေသည်.. “သဲလေး မောင်ပီးတော့မယ် မြန်မြန်လေးလုပ်”. . “ဟာ မပီးနဲ့လေ ကလျာ့ကို မလုပ်ရသေးဘူး” “ထပ်လုပ်မှာပေါ့သဲရဲ့ စုပ်ပါ”. .. ပြွစ် ပြွစ်..အ့….အား..ထွက်ပီသဲရေ… အကုန်စုပ် မကျန်စေနဲ့…အ့ အ့… ကလျာ ဖင်ကလေးကုန်းကာ ဆက်တိုက်စုပ်ရင်း သုတ်ရည်များ ထွက်မကျအောင် လီးကိုငုံထားရသည်. သဲလေး..မြိုချလိုက်နော်..မပစ်ရဘူး… ..အွင်း…ဂလု….ဟင်း… “မောင် အရမ်းများတယ် ခု ကလျာ့အလှည့်”. … လူငယ်ပီပီ လီးကသန်သည်..ကျမသွားပဲထောင်ဆဲ… ..လှလှအဖို့တော့ ပွတ်လို့ကောင်းတုန်း. သူမဘော်လီအတွင်းမှ နို့ကိုနှိုပ်ထုတ်ပီး.. ပွတ်နေမိသလို..စပကိုလဲ လက်နှင့်လိုးနေရသည်… ကြမ်းပေါက်က သေးနေ၍..တော်တော်ကြည့်ရသည်.. ဝေလွင်တခါပီးတာ တွေ့ရသည်.. သူမလည်ချောင်းများပင်ခြောက်လာသည်.
ကလျာ၏ စုပ်ကွက်များက မျက်နှာချောချောလေးနှင့်မို့ကြည့်ကောင်းလှသည်.. ဝေလွင်က လီးကို ဂွင်းရိုက်နေပီး.. “သဲ ပုဇွန်ကွေးလေး ဘွတ်မယ်”. . ဝေလွင်ရဲ့ဘယ်ဘေးမှာ ကလျာကွေးပေးသည်.. ပုဇွန်ကွေး စတိုင်မှာ လီးကိုတန်းထဲ့ဖို့မလွယ်ပေ.. ထို့ကြောင့်သူမရဲ့ခါးကို ဖိပီးဖင်ကော့အောင်အရင်လုပ်ရသည်.. ပီးလျှင်.သူမညာ ပေါင်ကို အပေါ်သို့တွန်းမပီး စအိုနှင့်အဖုတ်ကို မြင်အောင် ပြန်ပြင်ရသည်.. အပေါ်မှချောင်းသောလှလှမှာအလိုးခံချင်စိတ်တဖွားဖွားဖြစ်လာသည်.. ထို့ကြောင့်ဒူးထောက်ကုန်းပီး.. ခေါင်းမှာ ကြမ်းနှင့်ကပ် အပေါက်ချောင်း၍… လက်ချောင်းများက အာသာဖြေနေရသည်.. ဝေလွင်မှာစူပါလိုးတယောက်ဖြစ်သည်.. ကလျာ၏ပြေပြစ်သော ကိုယ်နေဟန်နှင့် တင်သား ဝင်းဝင်းလုံးလုံးလေးကို ကြည့်ကာ ပြူထွက်လာသောစပထဲလီးထဲ့ဘွတ်လေသည်…
အား…မောင်…အ့..အ့…အ့..အ့… ရှီး…သူမ အရမ်းကောင်းနေသည်… ဝေလွင် အကွေးလိုးနေရာမှ အားမရပဲ.. ဘယ်ဒူးကိုထောက်၍ သူမ၏ ထောင်နေသော ညာ ခြေထောက်ကို ဆွဲဖက်လျက်မုဆိုးဒူးထောက်ဝုန်းပါတော့သည်…အား…အား…အ့..အွင်း..အမေ့..အား.. ကလျာအော်သံကို အပေါ်မှ လှလှကြားနေရ၍..စိတ်အလွန်ထန်ကာ. စောက်ရည်များထွက်လေတော့သည်… “တူတူပီးမယ် သဲလေး ပီးတော့မလားပြော”. .. “အင်းအင်း..ပီး…အ့”. .. ဝေလွင်တဆုံးသွင်းလိုးစောင့်ရာ… သုတ်ရေများ ပန်းထွက်လေတော့သည်.. …. နှစ်ဦးသားမောဟိုက်၍အနားယူကြသည်. “”သဲ နောက်နေ့ ဖင်လိုးမယ်ကွာ..ခံမလား” “မောင့်သဘောပဲ..မနာရင် ပီးရော”. .. လှလှ အိပ်ယာ သူတို့အပေါ်တွင်ရှိတာ ဝေလွင်သိသည် ထို့ကြောင့် လေသံမြင့်၍ တမင်ပြောခြင်းဖြစ်သည်…
..လှလှကြားပါသည်..ဖင်လိုးမည်ဟုကြားရ၍..စိတ်ဝင်စားရပြန်လေသည်… …… …နောက်တနေ့မနက်..တနင်္လာနေ့ ဖြစ်၍ ရုံးများပြန်ဖွင့်သည်.. ကလျာအလုပ်က ၈ နာရီဝင်ရ၍စောစောထသွားလေသည်.. လှလှက အစိုးရရုံးမှာလုပ်သဖြင့် ၈နာရီခွဲမှာ ရေချိုးပီး ၉ လောက်မှသွားလေသည်… ဝေလွင်က ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှာလုပ်၍.. အစောကြီးမသွားရပါ..တနင်္လာနေ့ဆို. ညှပ်သူနည်း၍..နောက်ကျမှဆိုင်ဖွင့်သဖြင့် အေးဆေးအိပ်ယာထသည်..
ရေချိုးသံကြားရပြန်သည်.. ဝေလွင် အိပ်ယာနိုးပီး ချောင်းရန်ပြင်လေသည်… ခြေရင်းပြတင်းကိုမဖွင့်ပဲ.. အပေါက်ရှိလားရှာကြည့်လေသည်..တွေ့ပါပီ… သစ်သားကာ၍သံရိုက်ရာနေရာမှာအနည်းငယ်ကွဲနေသဖြင့် အဆင်ပြေလေသည်.. ပြတင်းနေရာမှချောင်းလျင် ဒဲ့မမြင်ရပေ.. ယခုနေရာကအပေါ်တက်လှေကားအောက်..ရေချိုးနေရာနှင့်ဒဲ့ဖြစ်လေသည်… ..လှလှစိတ်ထဲ ဝေလွင်တို့လိုးနေကြတာ မြင်နေမိသည်..ထို့အပြင်… ဝေလွင်ပြောသော…ရေဆေးငါးကြီး..ကို ပြန်သတိရမိ၍..ရေစိုနေသော ထမိန်အောက် တင်းနေသောနို့နှင့်ဖင်ကို ပွတ်ကြည့်နေမိသည်..
သူမအိမ်သည် ခြံစည်းရိုးအပြည့်ကာထားပီး..ခြံစည်းရိုးဘေးတွင် ပုံဏရိပ်ပန်းများစိုက်ထား၍ အပြင်က လူမမြင်ရပေ.. ရေချိုးနေရာမှာ ခြေရင်းဖြစ်သည်.. ရေတိုင်ကီးများက..ခြံစည်းရိုးဘေးတွင် စီကပ်ထားပီး အိမ်နှင့်ကပ်ကာ ရေချိုးသဖြင့် အကာလိုဖြစ်ကာမည်သူမှမမြင်နိုင်ပေ.. အောက်ထပ် အခန်းနှင့်ပြတင်းပေါက်မှသာ မြင်ရပေသည်… သူမ ဖင်ထိုင်ချလိုက်ပီးတခြားသူမြင်မှာစိုး၍ ကို့အိမ်ဘက်ကိုလှည့်ကာ..နို့နှင့်စပ ပေါင်များကို ဆပ်ပြာတိုက်လေသည်.. ထမိန်ရင်လျားကို ဖြေလျော့ပွတ်တိုက်ရသဖြင့်.. အိမ်တွင်းမှချောင်းနေသောဝေလွင်အကုန်မြင်ရလေသည်…
လက်တအုပ်စာထက်ကြီးသော နို့သားတင်းတင်းနှင့် ထောင်နေသောနို့သီးခေါင်းကိုအရင်တွေ့ရသည်.. ထို့နောက်ထမိန်လှန်၍.. ပေါင်ဖြဲကာ စပကို ဆပ်ပြာပွတ်လေသည်. အမွှေးရိပ်ပုံထင်ရသည်. ပေါက်ခါစအမွှေးအောက်မှာ..ဒညင်းဝက်ပမာ ပူးနေသော အဖုတ်ကြီးနှင့် လက်သန်းထိပ်လောက်ထွက်နေသော အစိကိုမြင်ရလေသည်…. ဝေလွင်စောစောစီးစီး..တချီထုရပေတော့မည်… သူမ ရေချိုးပီးနောက်အပေါ်တက်ချိန်.. ဝေလွင် အိပ်ယာထဲပြန်ဝင်လေသည်… …ထို့နောက်ပက်လပ်လှန်ကာ ဘောင်းဘီချွတ်၍ ထုလေတော့သည်.. ….လှလှ ရေချိုးပီးအပေါ်တက်စဉ်.. ဝေလွင်တို့အသံမကြားရ၍.. အလုပ်သွားလားအိပ်နေလားသိချင်မိသည်..ထို့ကြောင့် ကြမ်းပေါက်မှတဆင့်… အောက်ဘက်သို့ ချောင်းကြည့်မိပြန်သည်..
လှလှ ရင်တုန်ရပြန်သည်.. ဝေလွင်တခါးပိတ်မီးပိတ်ထုပြန်သည်.. အိမ်အကာသစ် အကွဲများကြားကနေရောင်ကဝေလွင်ကိုမြင်နိုင်စေသည်.. တအင်းအင်း ထုနေသော ဝေလွင်.. လီးကြီးမှာကြီးမားတာခုမှသေခြာမြင်ရသည်..ဒစ်ဖူးကြီးမှာမှိုပွင့်သဏ္ဍန်အလားထင်ရသည်.. လီးပတ်လည်အကြီးကဒစ်ထက်ကြီးမားကာဝေလွင်ဆုတ်ကိုင်ထားသောလက်ဂွင်းထက်ပင်ကြီးသည်… ဒါကြောင့်ကလျာကောင်းနေတာဟုလှလှထင်မိသည်.. လှလှသူ့စပကိုယောင်ပီးကိုင်မိသည်.. အရေပင်ထွက်နေသည်.. အလုပ်သွားခါနီးမို့ အာသာမဖြေချင်တော့ ..”အား..ရေဆေးငါးကြီး..အ့အ့…”ဟု ဝေလွင်အော်ပြန်သည်…
ဒီကောင် င့က်ိုချောင်းပြန်ပီထင်တယ်.. ဟွင်း..ဟွင်း…နှာဘူးလေး… သုတ်ရည်များပန်းထွက်လာသည် အထိသူမချောင်းကြည့်ပီး..အဝတ်များလဲကာ အလုပ်သွားရန်ပြင်လေသည်… ……. ..လှလှအလုပ်သွားဖို့အိမ်အထွက်မှာ.. ဝေလွင်မျက်နှာသစ်နေတာတွေ့၍.. “ဝေလွင် မောင်လေး အလုပ်မသွားဘူးလား”. . “တနင်္လာနေ့က အလုပ်မရှိသလောက်ပါးတယ်အမရဲ့ ဆံပင်ညှက်ရတဲ့အလုပ်က အဲ့လိုပါပဲဗျာ”. ……”ဟဲ့အာ့ဆို..နင်တခုလောက်ကူညီပါလား..”. . “ပြောလေ အမ..ရပါတယ်ဗျ”. . “င့ မီးဖိုပျက်သွားလို့ ပြင်ပေးပါလား”. . “ရတယ်လေ..ပြော..ဘာဖစ်တာလဲ”. . “ဟင်းချက်ရင်း ကွိုင်ပြတ်တာလေ.. ငါလဲမလုပ်တတ်ဘူး..င့အဖေလာမှလုပ်ခိုင်းမလို့ပဲ..သူကအလုပ်မအားဘူးဖြစ်နေတယ်” ..လှလှ မိဘများမှာ သက်သက်ဆီနေကြခြင်းဖြစ်သည်…
တခါတလေမှလာလည်သည်ဟုသိရသည်.. “အိုကေ . .ကျနော်လုပ်လိုက်မယ်.ပေးခဲ့”. . “နောက်ဖေးမှာဟမီးကြိုးတွေတတ်ထားတာနင်ဖြုတ်ပီးလုပ်လိုက်ငါလာရင်ကုန်ကျတာ​ပေးမယ်” ..”ဟုတ်မမလှ”. . သူမ အိမ်သော့ပေး၍ထွက်သွားလေသည်.. ..ဝေလွင် အိမ်ပေါ်တက်ကြည့်လေသည်. မီးဖိုမှာတကယ်ပျက်နေသဖြင့်လိုအပ်တာများသွားဝယ်ကွာ ပြင်ဆင်ပေးလိုက်သည်.. ထို့နောက် ရှင်းလင်းနေသောမလှလှအိပ်ခန်းကိုစိတ်ဝင်စားသွားသည်.. အခန်းတွင်းမှာ သေတ္တာတခု ဗီဒိုတခုနှင့် သနခါးအလှပြင် မှန်တင်ခုံတခုသာရှိလေသည်..
..အိပ်ယာခင်းအထူမှာလည်းညီညာပြန်ပြူးသဖြင့် သန့်ရှင်းလှသည်.. ကော်ဇောခင်းနေရာမှာ အပြဲအပေါက်ရှိ၍ တိတ်များဖာထားသည်.. ဝေလွင် အိပ်ခန်းကနှင့်မလှ အခန်းကအပေါ်အောက်ဆိုတော့.. ညဘက်လိုးရင်လှလှကြားနိုင်လေသည်.. ထိုစဉ်အိပ်ယာဘေးကော်ဇောအပြဲကိုတွေရသည်.. တိတ်မဖာထား၍..သူချောင်းကြည့်လိုက်သည်.. အောက်ကအိပ်ယာနှင့်ကွက်တိဖြစ်နေသည်… ဝေလွင်မလှလှကိုလိုးဖို့ဂွင်ဆင်ရပေမည်……. …..ညနေဘက်ရောက်လေသည်.. ကလျာမှာညနေ၇နာရီလောက်မှအိမ်ရောက်နိုင်သည်.. လှလှကအလုပ်ချိန်နည်း၍အစောပြန်ရသည်..
၄နာရီခွဲလောက်မှာ လှလှပြန်လာသည်… ဝေလွင်က အိမ်ရှေ့ထွက်ပီး.. “မလှရေ..မီးဖိုပြင်ပီးပီ ကြည့်လိုက်ပါအုံး ရော့အိမ်သော”. .. “ကျေးဇူးပါဟယ် သူများခေါ်လုပ်ရင် စိတ်မချရဘူးလေ အိမ်မှာ လူမရှိလို့ နင်ရှိတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့”. .. ..မလှ အိမ်ပေါ်တက်သွားသည်.. ဝေလွင် အိပ်ခန်းထဲဝင်လှဲနေလိုက်သည်.. ခဏအကြာမှာရေချိုးသံကြားရ၍ ချောင်းရပေအူးမည်… ..လှလှစိတ်ထည်းဝေလွင်ချောင်းမှာသိနေ၍ ရှက်တော့ရှက်မိသည်.. သို့သော်..သူ့ကိုယ်လုံးအလှကိုကြည့်ပီးမှန်းထုနေမှန်းသိ၍ကြေနပ်မိပြန်သည်.. လင်ကနောက်မိန်းမယူသွားတာကြာပီဖြစ်၍ တခါတလေခံချင်စိတ်ပေါက်ကာ.. အာသာဖြေရတဲ့အချိန်လဲရှိနေသည်… ..ရေစလောင်းပီးတာနှင့် ထမိန်ကို ဖြန်ဝတ်လေသည်..နို့နှင့်ဗိုက်မှာကောက်ကြောင်းညီညီပေါ်လာလေသည်.. ဝေလွင် ချောင်းပြန်သည်..
ဂွင်းမထုတော့ပါ တောင်နေတဲ့လီးကိုလွှတ်ပေးထားလိုက်သည်.. ညကြရင်မိန်းမကိုဘွတ်ရမည်ဖြစ်၍. အားကုန်လို့မဖြစ်ပေ.. လှလှ တမင်လုပ်ပြသလားထင်ရသည်. နို့ တဝက်လောက်မှာ ထမိန်စည်းလိုက်ပီး နို့သားဖွေးကြီးကို ပွတ်နယ်နေသည်.. နို့သီးခေါင်းမပေါ်ရုံပဲရှိသည်.. ထို့နောက်ထိုင်ချပီး​ပေါင်တဝက်ထိထမိန်ကိုလှန်ကာဆပ်ပြာ တိုက်ပြန်သည်.. ထပ်မချောင်းချင်တော့ သုတ်ထွက်ကြမှာစိုးလေသည်.. အခန်းထဲပြန်ဝင်ကာ. ပက်လက်လှဲ၍စာအုပ်ဖတ်နေလိုက်သည်.. … ဝေလွင်အခန်းသည်.အနည်းငယ်မှောင်လာသည်. .နေကျချိန်ဖြစ်သည်..
အောက်ထပ်ကအပေါ်ကြမ်းကိုမော့ကြည့် လျင် ကြမ်းကြားမှာ ကောဇောကြောင့်ပိတ်နေ၍.အလင်းမဝင်နိုင်ပေ.. ထိုစဉ် နေရာတခုလင်းသွားသည်.. ဝေလွင့်မသိချင်ယောင်ဆောင်လိုက်ပီး. ဘောင်းဘီလျော့ဝတ်၍ လီးကိုပွတ်နေလိုက်သည်.. လှလှ.သူ့ကိုချောင်းနေမှာသိနေသည်.. လင်းသွားသောနေရာမှာ ဝေလွင်တွေ့ခဲ့သောကြမ်းေ ပါက်ဖြစ် သည်.. လှလှ လီးကြိုက်တာသိလိုက်ရလေသည်.. ဝေလွင် သူ၏လီးကို ဂွင်းတိုက်ပြနေလိုက်သည်… အလင်းပေါက်လေးပိတ်သွားတော့မှ လီးပြန်သိမ်းလိုက်လေသည်… “ဒီစော်ကြီးကိုရအောင်လိုးမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်.. …… ညစာစားရင်းတီဗီ ကြည့်မို့စီစဉ်ကြသည်.. ကိုရီးယားကားအရူးအမူးစွဲနေသော ကလျာက တီဗီ ရှေ့ဆုံးမှာနေရာယူကာ အရင်ဆုံးကြည့်နေလေသည်.. “အမလှ ဘာချက်လဲဗျ..”. . “ခရမ်းသီးနှပ်ထားတယ်လေ”. . “အမကခရမ်းသီးကြိုက်တာလား..ဟားဟား” “တခါတလေ စားတာပါဟယ်..ခ်ခ်..”. . သူမ ဝေလွင်ရဲ့လက်ကိုပုတ်ရင်းပြောသည်…
အခြေအနေတော့ကောင်းပီ.. ..”ကလျာ မိန်းမရေ.. မောင်စားဖို့ပြင်လိုက်အုံးမယ်နော်”. . “အင်းပါ..” ကလျာ တီဗီ ကိုငေးရင်းပြောလေသည်.. ထိုစဉ် လှလှက… “ဝေလွင် ထမင်းစားပွဲဝိုင်း ချပေးပါဟယ်”. စားပွဲမှာထောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်.. စားပွဲကို လှလှနှင့်ဝေလွင်တယောက်တဖက်မကြသည်.. မျက်နှာခြင်းဆိုင်ကုန်းပီးမကြသဖြင့်…. လှလှအင်းကျီးဟိုက်ကျ၍.ရင်သားနှစ်မွှာပေါ်သဖြင့်. .ဝေလွင်စူးစိုက်စိုက်ကြည့်ကာ “စားချင်လိုက်တာဗျာ”. .. “စားချင်ရင်စားလေ ခ်ခ်..ထမင်းဟင်းတွေ” လှလှ ပြုံးပြရင်း ပြောသည်.. ထိုစဉ် ကလျာရောက်လာပီး… “အမရေ ကျမတော့ တီဗီ ကြည့်ရင်းစားမယ်..ဇာတ်ရှိန်ကတက်နေပီ”. .. “အေးအေး..အမတို့ခုံမှာပဲစားတော့မယ်.
” ကလျာထမင်းဟင်းပုကန်ထဲပုံထဲ့၍ တီဗီ ရှေ့သွားထိုင်စားတော့သည်… လှလှနှင့်ဝေလွင် မီးဖိုချောင်ထဲမှာစားဖို့ပြင်သည်.. လှလှ ထမင်းခူးရန် ထရပ်ပီး ပကန်ယူလေသည်… “အမကျနော်ထည့်ပေးမယ်”. . လှလှနောက်မှဝင်ရပ်ပီးဝေလွင် လီးနှင့်တင်သားကိုထောက်၍.ပြောလိုက်သည်.. “အွင်း..ထဲ့လေ..”. . သူမ ဖင်ကော့ပေးပီလီးနှင့်ကပ်ထိပေးသည်. ဝေလွင် အချိန်ဆွဲလို့မဖြစ်.ခိုးစားရတာ ရင်တုန်လေသည်.. သူမ၏ ထမိန်ကိုဆွဲလှန်ပီး.. “ထဲ့မယ်နော်..”. . “မြန်မြန်ထဲ့..အွင်း”. . လီးကိုကော့ပေးသော ဖင်ကြားမှ အဖုတ်မြောင်းထဲ သွင်းသည်.. အပေါက်မတည့်၍.လှလှက.လီးကိုကိုင်ပီးအဖုတ်ဝတေ့သည်…
အရည်စိုနေသော အဖုတ်နှင့်လီးတွေ့လေပီ.. “ဗြိ…ဗြွတ်…အင်း…မောင်လေးမြန်မြန်လုပ်”. .. “ဟုတ်..ရေဆေးငါးကြီး..ကောင်းလိုက်တာ”. .. အ့.. အွင်း..အွင်း… ဝင်းဝင်းအိအိဖင်ကြီးကို ကြည့်ကာ သူမခါးကိုကိုင်၍..စောင့်လိုးလေသည်.. ဘွတ်…ဖွတ်…ဖတ်..ဖတ်… စိတ်အားထက်သန်နေသဖြင့်သုတ်ထိန်းဖို့အချိန်မရတော့… “မြန်မြန်..လုပ်ပါ…ကလျာမြင်မယ်”. .. အ့..အ့..ပီးပီ… ၁၅ ချက်လောက်နှင့် သုတ်ထွက်သွားလေသည်… လှလှ လီးကို ကိုင်ထုတ်လိုက်ပီး… ထမိန်နှင့်အရေများသုတ်ကာ.. အိနြေ္ဒ မပျက် ထမင်းခူးလေသည်… ဝေလွင်လည်း စားစရာများပြင်၍.. စားပွဲဝင်ထိုင်လေသည်… “တီဗီ ကြည့်ရင်းစားကြမယ်ဟာ”. . လိုးပီးပီဖြစ်၍.စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပေ. စားပွဲ ကိုတီဗီ ရှေ့ရွှေ့ပီး ထိုင်စားကြလေသည်.. စားပွဲဝိုင်းအတိုဖြစ်၍ကြမ်းတွင်ထိုင်ကြသည်… အရှေ့တွင် တီဗီ နှင့် ကလျာရှိ၍.. ဝေလွင်နှင့်လှလှ အတူ ကပ်ထိုင်ကာ ကြည့်ကြသည်…
လှလှ ဆန္ဒ မပြည့်သေးပါ..ခိုးလိုးရ၍.. အရေထွက်ဆဲဖြစ်သလို..ဝေလွင်၏သုတ်ရည်များ အဖုတ်တွင်းမှ ထွက်ကြနေသည် ..ထို့ကြောင့် ဘေးမှ ဝေလွင်၏ လီးကိုကိုင်စွပေးလေသည်… လီးမှာ လှလှ၏ လက်နုနုလေးရဲ့ပွတ်သပ်မှုကြောင့်ထောင်လာပြန်သည်… “မိန်းမရေ.အဲ့အပိုင်းပီးရင်အိပ်ကြမယ်ကွာ…”. . “ရှင်အိပ်ချင်အိပ်လေ ကျမ နောက်တပိုင်းကြည့်ချင်သေးတယ်”. . “ဟဲ့ ဝေလွင်သူကြည့်ပါစေဟဲ့..နင့်ဖာသာအိပ်လေ”. .. ထမင်းစားပီးနောက်..ဝေလွင်က အိပ်တော့မယ်ဟုဆိုကာ အောက်ထပ်ဆင်းလေသည်… မဆင်းခင်မှာ လှလှကို မျက်စိမှိတ်ပြပီး အောက်သို့လာရန်အထှာပေးလေသည်. လှလှလည်း စားပီးသမျှသိမ်းဆည်းပီး.. “ညမကလျာရေ..ကို့ဟာကိုကြည့်နှင့် အမ ဗိုက်မကောင်းလို့အိမ်သာသွားအုံးမယ်”. .. “ဟုတ်..အမ..”. .. လှလှ မီးဖိုချောင်လှေကားမှ အောက်သို့ဆင်းလာသည်.. နောက်ဖေးပေါက်မှ ဝင်ကာ ဝင်လွင်ဆီတန်းသွားသည်.. နှစ်ဦးသား အိပ်ခန်းဆီ သွားကြသည်.. “အမ လီးစုပ်ပေးဗျာ..လိုးကောင်းအောင်လို့..” သူမ ချက်ချင်းထိုင်ချပီး..လီးကိုဆွဲထုတ်၍ စုပ်ပေးလေသည်.. လီးကိုရေခဲချောင်းလို အားရပါးရစုပ်ပေးသည်…
ဒစ်ထိပ်ကို ငုံဆွဲတဲ့အခါတိုင်းဝေလွင်ကော့တက်ရလေသည်… လီးကိုယ်ထည်ကို နှုတ်ခမ်းနှင့်ပွတ်ဆွဲပီး လဥကို ပါ စုပ်ကာ..ဂွင်းထုပေးပြန်သည်.. “အမ ဖင်တွေအရမ်းလှတယ်..အိချောပိုလိုပဲကိတ်နေတာ.. စဖုတ်ကလည်းစီးနေတာပဲ.. ကုန်းပေးဗျာ..ဖင်ချချင်တယ်”. . “နင့်လီးက အကြီးကြီးလေ င့ဖင်ပေါက်သေးသေးလေး”. . “ကလျာလည်းသေးသေးလေးပဲ လိုးရင်ဝင်တာပဲ..ထထကုန်းတော့”. . လှလှကော့ပီးကုန်းသည်… အရင်ဆုံးအဖုတ်ကို ယက်လေးလိုက်သည်.. အ့..ရှီး…ကောင်းလိုက်တာ… အဖုတ်ထဲအရင်လိုးမယ်..အမတချီပီးမှဖင်လိုးမယ်… လီးမှာ သီးမွှေးငှက်ပျောသီးလို ကွေးသဖြင့်..ကော့ပေးသော စအို နှုတ်ခမ်းကိုပွတ်ဆွဲပီး..စပထဲကောက်ပီးဝင်လေသည်.. လှလှ အရသာနှစ်မျိုးကောင်းလေသည်. ဝေလွင် လက်ညှိုးကိုတံတွေးဆွတ်ပီး.. စအိုထဲထဲ့သလို..အဖုတ်အား ဆက်တိုက်လိုးလေသည်…
လှလှ ခြေသလုံးများထောင်ကာ..ခေါင်း ကကြမ်းမှာဝပ်ပီးခံလေသည်.. အ့ အွင်း လိုးလိုး..နင့်လီး.အရမ်းကောင်းတယ်… အ့..အ့.. အဖုတ် သားရဲရဲကိုတံတွေးထွေးပီးချောဆီထဲ့ရသည်.. ဖတ်…ဖတ်..ဖပ်…လဥနှင့်စပ ရိုက်မိသည် တဆုံးသွင်းလိုးသဖြင့် ကာမအထွတ်အထိတ်ရလေသည်… “မရပ်နဲ့ အမြန်လိုး..အား..ပီးပီ… အစိမှ အရေကြည်များပြစ်ခနဲထွက်လေသည်.. ဝေလွင် လီးကိုစအိုမှာထောက်ကာ အပေါ်မှဖိချလေသည်… ဗြိ…အား….နာတယ်… ကလျာကြားသွားမယ် မအော်နဲ့…. ဝေလွင် သုတ်ပိုးနားထင်ရောက်လေပီ လှလှကြောကို ကြမ်းနှင့်ကပ်အောင်ဖိချရာ နို့များဘေးသို့ကားထွက်လာသည်… ငရုတ်သီးထောင်းသလို ဆက်တိုက်ဖင်လိုးလေတော့သည်..
ကြပ်လွန်းသဖြင့် တံထွေးထွေးကာ.. ဆက်လိုးပေးသည်.. အမ..အမ..အား..ဖင်ခံတာကောင်းလား. …ကောင်းလာပီ..လိုးလိုး..နင့်အရေတွေ ဖင်ထဲပန်းထဲ့… ..ဖင်သားများနီရဲလာသည်…စအိုတွင်းမှာပူနွေးနေပီး..လိုးရတာအရမ်းကောင်းသည်.. အ့..အ့..အမ..ကျနော်ပီးပီ..အ့… သုတ်ပူပူများ စအိုထဲ ပန်းလေတော့သည် … ဝေလွင် နင့်မိန်းမကို လိုးပီးတိုင်း င့ကို လာလိုးပေးဟာ.. “စိတ်ချအမ..နောက်နေ့ အမ အပေါ်ကလိုး”. .. ……ထိုစဉ် အပေါ်ထပ်မှ ခြေသံကြား၍. လှလှ ထမိန်ပြန်ဝတ်ပီး နောက်ဖေးသို့ ပြေးထွက်သွားလေသည်…
ကလျာ အိပ်ခန်းထဲဝင်လာလေသည်. “မောင်ရေ..အိပ်နေပီလား”. . “အိပ်ဘူး. သဲလေးကိုစောင့်နေတာ.. လာ အပေါ်က တက်လိုး”. .. “ဖင်လိုးမယ်ဆို..”. . “သဲသဘော အပေါ်က ထဲ့ မောင်လှန်ပေးမယ်”. .. ဝေလွင့် လီးအပေါ် ကလျာထိုင်ချသသည် လိုးပီးစ လီးမှာ ညောင်းနေ၍.ချက်ချင်းမတောင်.. “သဲ အရင်စုပ်ပေး..မောင့်လီးကကြီးတော့ချက်ချင်းမထောင်နိုင်ဘူး”. . သူမ ကုန်းစုပ်ပေးလေသည်.. ထိုစဉ် အပေါ်ထပ်ကြမ်းပေါက်မှ အလင်းလေးပေါ်လာသည်… လှလှ ချောင်းရင်း..စပ ပွတ်နေမိသည်.. ဝေလွင် ထိုအပေါက်ကိုလှမ်းကြည့်ပီး… “သဲရေ တက်စောင့်တော့..မနားနဲ့..”. . ကလျာ စအိုမှာ လီးကိုတေ့ပီး.. ဖိထိုင်ချကာ စောင့်လေတော့သည်…..ရွှေကြာမြိုင်..ပြီးပါပြီ။။
ကို ဗစ် အ ချစ်